Mid ka mid ah trick fudud si ay u sameeyaan wax kasta oo video muuqdaan kuwo xirfad dheeraad ah waa in lagu daro soundtrack ah waa in. Warka fiicani waxa weeye in ay jiraan barnaamijyadooda badan oo kala duwan la heli karo si taas kuu sameeyo, haddii on PC, Mac ama Android, waxaa jira xal ay tan u sameeyaan si fudud oo si deg deg ah, halkan waxaan ku eegi doonaa sida ugu fiican ee loo heli karo madal kasta.
Qeybta 1: Windows Apps inay dar Music Videos si
Qeybta 2: Mac Apps inay dar Music Videos si
Qeybta 3: Android Apps inay dar Music Videos in
Tani waa codsi la yaab leh oo lacag la'aan ah ay ku jiraan xoolo ah muuqaalada ee dhammaan video tafatirka wareega iyo diinta, laakiin dan gaar ah noo dabcan waa sifooyinka audio. Virtual dub kuu ogolaanaya in aad ku darto track music ah in aad videos fudayd, haddii video uu leeyahay dhawaaq, aad wax Faydi oo bedeli af kale oo gebi ahaanba, iyo tan iyo dhawaaqa tagaa waxa ay ka dhigan tahay xirmo aad u dhamaystiran, in lagu daro siyaada video tafatirka ay ka mid yihiin midab kala duwan iyo tafatirka dheelitirka, iyo sidoo kale goynta iyo biirida clips.
Guud ahaan xirmo ballaaran oo si fudud ku daray in kasta oo music video qaban kara, in kasta oo gacanta ku yihiin wax yar ka yar dareen badan kuwa kale halkan.
Qurbaan ikhtiyaar ah Microsoft ayaa timid kaddib markii qeyb ka mid ah 2012 Windows Essentials ka pack, inkasta oo aad ku rakibi karo u gaar ah haddii aad uma baahna qaybaha kale. Sida aad ka fili lahayd ka Microsoft waxay ku salaysan tahay agagaarka interface user tayo sare leh si fiican u shaqeeyo, waa ay fududahay in la fahmo iyo in muuqataa weyn. Waxaa ka mid ah xulashada fiican qalabka video tafatirka iyo sidoo kale qaybaha audio aan halkan oo diiradda saaraya, iyadoo intaa ku dartay in ay wax audio video si fudud la gaadhay gudaha ka software-ka ah.
Guud ahaan xirmo smart raadinaya in uu wax kasta laga yaabaa in aad rabto in aad ka gudahood interface nadiif ah oo si sahlan ay u isticmaalaan.
3. Adobe jilitaankii
Iyadoo eegnay qaar ka mid ah software free ay qiimo eegaya waxa laga heli karo dhamaadka kale ee scale qiimaha, iyo pro Adobe jilitaankii waa heerka video qalab tafatirka ganacsi oo si cad waa ka dhigina u fudud ku daray music qaar ka mid ah si aad video, laakiin waxa ay ku samayn kartaa waxaa, si fudud, jiididda iyo hoos u interface dhab ahaantii mid ka mid ah ugu fudud ee liiska si dhab dhaqaaqay kuwan raadkaygay audio ka dhigaa, laakiin ma lagu siri karaa, taasi waa barnaamij aad u adag oo qaali ah in uu leeyahay kala duwan ugu ballaran ee aad kartida tafatirka ka heli kartaa.
Ee ah kuwa si weyn ugu soo video tafatirka, raadinaya in uu ordo, waayo, faa'iido youtube channel ama la mid ah, markaas software waxa uu leeyahay wax walba oo aad rabto in aad, iyo halka ay u la kaliya loo isticmaali karaa in lagu daro audio in video ah, waxaa jira qalab fiican haddii ay taasi tahay oo dhan aad u baahan tahay, version ah jari iibin sidii jilitaankii Qaybaha wakiil ka editor sare oo tayo leh kharash macquul ah, tusaale ahaan.
Qurbaan A ka badan fillooyinka hadda, iyo mar kale xirmo fiican software oo ay ku jiraan qaar ka mid ah qalabka tafatirka video waxtar leh oo ay la socdaan goobaha audio aan dooneyno. Dhinacyada leh awood uu ku dari music video in a, software Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad qas ah kuwan raadkaygay yar wada abuuro aad soundtrack u gaar ah, waayo, video kasta oo aad jeceshahay, interface waa mid yara nadiif ah iyo mar barasho, aalada waa sahlan in la fahmo.
Guud ahaan, xoogaa yar oo fiican ee software, ee $ 70 waa la awoodi karo oo dhamaystiran oo ku filan si ay ugu adeegaan si kasta oo u baahan waxaa laga yaabaa in aad leedahay ka baxsan oo kaliya bedelay audio.
Xirmo A ganacsi ee jaban iyo miisaanka qurbaan ka Magix taageertaa 4K video mustaqbalka, oo ka dhigaysa ku daray of music si ay ula socdaan a video aad u fudud ay interface toos ah iyo uncluttered. Shaqeynta dheeraad ah sida in ay qabtaan si toos ah uga soo video kamarado iyo qaar ka mid ah qalabka diinta ka fiican tan ay ka dhigto barnaamij ballaaran u videographer ka hiwaayadda.
Qof kasta oo raba in la abuuro dhawr ah filimada guriga iyo mashaariicda video ka baxsan si fudud ku daray kuwan raadkaygay audio, taas oo laga yaabaa inay tahay sida ugu fiican oo ka mid ah mashaariicda ganacsiga daaqado, kuwa kale waxay leedahay waxyaalo dheeraad ah, laakiin wax badan tahay user celceliska marnaba u baahan doontaa, interface fudud ee halkan ku hayaa wax ka noqdo soo koobi kari u user celceliska.
Malaha free video ah editor ugu fiican u yaqaan for Mac waxaa, sida software Apple u adeegsanayaa interface nadiif ah oo fudud oo ka dhigaya isticmaalaya software ah sida ugu fudud ee wuxuu noqon karaa, iyadoo ay ka mid yihiin go'an kala duwan ee muuqaalada daboolaya qayb kasta oo tafatir. Audio waxaa si gaar ah si fiican loo daryeelay halkan, la soo jiitaa iyo hoos u dhac ku daray ama ay ka saareen ee kuwan raadkaygay audio wixii video.
Xirmo A weyn oo waa mid aad u fudud in la isticmaalo, iyo sidoo kale isku la software kale Apple iyo shaqeeyaa si aad u wanaagsan dhab.
Tani waa barnaamij lacag la'aan ah markii hore loogu talagalay Linux iyo UNI- si Mac ah. Ha u ogolaan nacas qiimaha tag aad inkastoo, marka la eego sifooyinka, waxa ay leedahay wax badan ay wadaagaan la dhamaadka sare ee baakadaha ganacsi oo badan waxa aanu la iMovie, inkasta oo uusan u oggolaan in la barbardhigo kuwa kale marka la eego user interface. Isagoo sheegay in, uu bedelay kuwan raadkaygay audio dadka kale ama ku daray track music ah in kasta oo video waa mid fudud oo aan caadi aheyn oo software u shaqeeyo si aad u wanaagsan dhab.
Qurbaan A ka yar la safeeyey is barbar dadka kale, laakiin waa lacag la'aan ah oo si wanaagsan buu falaa shaqada.
Barnaamij sahlan yahay inta badan, in kastoo uu ka wakiil yahay in qiimaha hoose, inkasta oo aan u fiicneyn sida uu u fiican si loo eego sida iMovie, waxa aanu ku soo bandhigaynaa interface soo jiidasho leh oo awood u fudud ah si ay u fahmaan aalada u muuqaalada kala duwan.
Ku darista audio cusub in video ah waa xog iyo software ee guud sameeya waxa aad ka filan lahayd oo u qabata ku filan.
Guud ahaan, in xaaladaha ugu xirmo fiican, laakiin kuwa doonaya shaqeynayaan si weyn u weyn waxaa jira Kdenlive gebi ahaanba bilaash ah oo u fudud in ay isticmaalaan software users ugu raadiyo, iMovie waa uun si aad u wanaagsan, way adag tahay in la arko halka qallalku in.
4. Moyea Flash Video MX u Mac
Xirmo fiican A oo bixiya kala duwan oo badan oo qaab waafaqsan, waxay bixisaa qalabka fudud loogu daray ama bedelay audio sida aan u baahanahay, iyo Sugaa feature Converter file ah iyo sidoo kale, ay ka mid yihiin taageero u flash files. Interface waa cad yahay oo si sahlan loo fahmi iyo nooca hawlaha ugu badan oo inaga mid ah waxay u baahan yihiin in la sameeyo ay u shaqayso si aad u wanaagsan runtii, siinta iMovie orod ah ay lacag.
Taas ayaa ka dhigaysa mid shaqo wanaagsan oo ay la ciyaari doonto iMovie, oo uu leeyahay badan si ay u bixiyaan, laakiin haddii aad runtii u baahan tahay flash waafaqsan, iMovie fursadaa ka wanaagsan.
Waxaan bilaabay fiiriyeen ee Mac software u tafatirka audio aad video galay iyagoo eegaya qurbaanka la macaamilka iMovie, oo aynu u soo afjari doonaan iyagoo eegaya dhamaadka ka soo horjeeda ee miisaanka, qalab xirfad Apple ee Final Cut Pro. Haa, waxa ay ku dari kartaa audio in si kasta oo video, dabcan, laakiin sida la software adobe ka, waxaa la isticmaalayo oo keli ah in uu yahay xoogaa ka dhigina, tani waa xirmo oo dhamaystiran oo awood u outputting muuqaalka caadiga ah, oo xambaarsan tag qiimaha ay u dhigma ah . Lahaanshaha sheegay in, sida la pro Ciyaar, kuwa aan waqti ay ku bartaan iyo baahida loo qabo in la isticmaalo muuqaalada qorshahan, waa wax soo saarka fantastik ah, interface nidaam iyo aalada siman, qalab ku filan iyo plugins si loo daboolo baahiyaha wax.
Xirmo A xirfad leh oo awood u leh wax kasta oo ku salaysayn khalkhalgelinta audio ama video aad waligaa u baahan tahay ayaa laga yaabaa, laakiin heerarka sidoo kale sare ee qiimaha iyo qalooca barashada isticmaalka yimaado. Wax soo saarka Fantastic, laakiin kaliya kuwa u baahan tahay kartida ay, cid kasta oo kale, iMovie waa in doorashada.
Mid ka mid ah hore video tifaftirayaasha ee Android, oo weli ka mid ah kuwa ugu fiican, AndroVid ku dhisan tahay interface caqli iyo Xoolo ka mid ah qaababka. Gacanta Audio waa u fududahay, jidaynayey bedelay kuwan raadkaygay jira ama ku daray track ah in kasta oo video si fudud, iyo tiro balaadhan oo ah muuqaalada video tafatirka ka mid ahaa sidoo waxaa la yaab ma laha, waxaa weli xoog.
Dhab ahaantii mid tahay in la tixgeliyo, xirmo fiican oo heer sare oo dhamaystiran tafatirka android.
Iyo duwan tani waa mid ka mid ah barnaamijyadooda dambeeyay diyaar u Android. Waxa kale oo interface xunna dhisay in bandhigaysaa dhigay mid ah qaababka in, iyadoo aan sidii dhamaystiran sida qaar ka mid ah, wuxuu daboolayaa dhammaan baahiyaha aasaasiga ah waxaa laga yaabaa in aad leedahay ka xirmo noocan oo kale ah. Ku darista audio waa la gaadhay si fudud oo software si deg deg ah oo si habsami leh u shaqeeyo.
A interface fiican, oo dhalaalaya oo faraxsan oo u qabtay feature gaaban, laakiin waxtar leh kani doorasho wanaagsan, qof kasta oo raadinaya qalabka tafatirka aasaasiga ah.
Xayaysiiyo sida video editor ugu caansan ee Android, taasi dhab xirmo aad u dhamaystiran, waxa ay leedahay interface aad u dhalaalaya oo fudud, iyo inkastoo lacag badan oo ka mid ah muuqaalada, isagoo intaa ku daray audio in aad videos weli qaliin fudud oo software ah aad u shaqaysaa si deg deg ah.
Oo in alla inta aanad ka heli interface ka dhigin mid dhalaalaya oo aad u badan, taas oo laga yaabaa inay tahay xaalad ah in wax soo saarka kulan sheegaya advertising ah, oo ka dhigan mid ka mid ah ugu wanaagsan video tifaftirayaasha laga heli karaa Android.
App kale oo ay ku raran yihiin qaababka, waayo, dunida video app this bixisaa wax walba oo laga yaabaa in aad rabto in aad ka app tafatirka Android, isagoo intaa ku daray in video video ah oo aad si fudud u samayn, oo interface waa midabo, laakiin laga yaabaa in aan sida garish sida qaar ka mid ah halkan, taas oo dad badan oo doonistiisa tixgelin wax fiican.
App wanaagsan A for tafatirka video guud ahaan, in kasta oo kuwa kaliya oo raba in lagu daro audio laga yaabaa inaad fiiriso baakadaha fudud dheeraad ah oo ka soo baxay waxaa ka gudub iyo qaababka ay u adeegsan doonaan.
Kan sameeyey 5. Movie Studio
App Tani socota Jidka kuwa kale halkan, bixiya set ballaaran feature oo ay ku jiraan qalab badan oo video tafatirka iyo sidoo kale awood u leh in lagu daro track music kasta oo aad videos, inkastoo eschews design ka interface dhalaal, waayo, wax ka badan wax yar ka hor joogsan. In howlgalka u oggolaanaysa in ay gacanta ku badan yihiin kuwa kale ee halkan.
Waxaa laga yaabaa halkan in isticmaalka app ugu fiican, waxa ay ka maqan muuqaalada qaar ka mid ah marka loo eego laba qof, laakiin waxay bixisaa doorashada oo dhamaystiran marka ay timaado ku daray oo la isku daro kuwan raadkaygay audio aad video gal, la interface ugu dareen leh.
Haddii aadan jeclaan jooga oo dhan, oo aad qaadi karto Fantashow xisaabta, taas oo ka kooban boqolaal Hababka movie sida dhalashada, arooska, qoyska, ilmaha, jacayl, fasax, dugsiga iyo safarka galay. Waxaad si video gelin kara music si toos ah aad. Download version maxkamad free of Fantashow halkan .
> Resource > Video > Top 15 Apps inay dar Music Videos in